Khulisa hemoglobin egazini uvame adingekayo iziguli ukuthi nginesifo igazi. Izizathu kulesi simo sokugembula kungenzeka eziningana. Ngezinye izikhathi ezihambisana ne ukuthuthukiswa isifo, kwezinye izimo, i-hemoglobin incipha ngenxa bekhulelwe noma okungafanele / umsoco ingafaneleki.
Indlela ukwandisa elithwala umoya-mpilo egazini usebenzisa ukudla?
Kaningi lokhu amaprotheni lokuhlushwa ezibalulekile incipha lapho umzimba uthola zintuleka. Ukwandiswa ukusetshenziswa kwenzeka ngesikhathi sokukhulelwa, futhi ukunciphisa isibalo namarisidi siyenzeka uma kukhona amandla okunganele, ukuntuleka ekudleni imikhiqizo ethile, kanye khona ezinye izifo ezingelapheki emathunjini ezifana izilonda emathunjini (isifo Crohn).
Ukuze ukubuyisela ezingeni elithwala umoya-mpilo, kubalulekile ukwelapha, noma okungenani zama nxephezela / ukunciphisa umsebenzi izinqubo sokugembula kule ipheshana wokugaya ukudla. Ukuze wenze kanjalo, funa usizo ovela gastroenterologist. Esikhathini Ngaphakathi mo of khulelwa nokudla okungafanele udinga ukushintsha indlela odla ngayo. Umuntu ofuna ukuba banqobe yensimbi ukuntula kwegazi, ubophekile ukuba nsuku zonke ukudla okungenani 200 amagremu of inyama. Njengoba abesifazane abakhulelwe, kufanele azame ukudla nakakhulu, ngoba wadla yensimbi isakazwa ngqo eziphilayo ezimbili. Kufanele kukhunjulwe ukuthi indlela engcono kakhulu yokusebenzisa imikhiqizo inyama yengulube noma yenkomo. Ziqukethe imali ngokwanele ezinkulu yensimbi. Izindleko inyama, nakuba zizinkulu, kodwa uyivumele ngokwami namanje iningi labantu.
Kepha ukudla ezifana nokunye okufana nokolweni noma emhlophe juice, bese empeleni wona anezinsiza nesizotha kakhulu ukuphakela umzimba womuntu nensimbi. Naphezu emakamu kuqhathaniswa okusezingeni eliphezulu kule mikhiqizo, lokhu metal kuyinto ngesimo trudnousvaivaemoy emathunjini. Ngakho-ke, le mikhiqizo akakwazi ngokuthi ekuphenduleni umbuzo mayelana nendlela ukwandisa hemoglobin egazini.
Ngo kwegazi, indlela ebalulekile yokwelapha kokuthola imithi ekhethekile. Kuze kube manje, ama-ejenti ukuthi ukwandisa hemoglobin egazini, angathengwa cishe zonke ikhemisi. Iningi lawo atholakala. "Hematogen" izidakamizwa ingasetshenziswa ngenhloso yokuvimbela. Kuhlanganisa izingxenye sezinkomo igazi, okunothe. Uma anaemia uye wakwazi ukuthuthukisa, odokotela bavame nemithi ekhethekile ukwandisa hemoglobin egazini. Ngokuvamile ukusetshenziswa namuhla izidakamizwa: "Ferrum Lek", "Ferrograd", "yensimbi sulfate," "Iron gluconate" nabanye.
ukwanda ngokushesha elithwala umoya-mpilo
Ngo nasezimweni ezinzima kakhulu uma ileveli amaprotheni lize liba ngaphansi kwe-70 g / l, odokotela kufanele nika igazi. Phakathi nale nqubo, igcwele amangqamuzana abomvu egazi elampontshelwa. Lokhu kukuvumela ukuba ngokushesha ukwandisa hemoglobin egazini, kanye ukwandisa inani "Ifoni abomvu".
Ngiyithola kanjani isitifiketi siqu Webmoney: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Dream Ukuhunyushwa: yini dream angiqabule
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukususa umlando ku-Skype.